» प्रविण बेड्वाल भन्छन्–‘मानिसमा मानवता नभए के मानिस ?’
प्रविण बेड्वाल भन्छन्–‘मानिसमा मानवता नभए के मानिस ?’
२५ आश्विन २०७७, आईतवार ०८:२५
मकवानपुर, २५ भदौ । नेपाल आईडल सिजन ३ का फर्स्ट रनर अप प्रविण बेड्वालका विभिन्न गीतहरु यतिखेर चर्चामा छन् । प्रविणले गाएका विभिन्न गीतहरुमध्ये केहीका अडियो भर्सन, केहीका लिरिकल भर्सन र केहीका म्युजिक भिडियो नै सार्वजनिक भईसकेको छ । यसैबिच केही महिनाअघि लिरिकल भर्सनमा मात्र सार्वजनिक भएको नयाँ गीत म्युजिक भिडियो सहित सार्वजनिक भएको छ । यसअघि गायक बेड्वालको लिरिकल भर्सनमा मात्र सार्वजनिक भएको ‘यसलाई पर्दा’ बोलको गीत अहिले म्युजिक भिडियो सहित रिलिज भएको हो । हेर्नुहोस् यो भिडियो रिपोर्ट–
विश्व नै कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको बेलामा मानव समुदायमा आएको संकटका विषयमा यो गीत तयार भएको छ । मानिसमाथि ठूलो बज्रपात परेको र अहिले मानवता भन्ने चिज नै हराउन थालेको विषयमा गीतका शब्दहरु कोरिएका छन् । कोरोना महामारी सुरु हुनुपूर्व एकअर्कालाई सहयोग गर्दै आएका मानिसहरु अहिले कोरोनाका डरले मानविय संवेदना देखाउन चुकेको विषयहरु प्नि गीतिले उठाएको छ । प्रविणको आवाजमा तयार भएको गीतमा बसन्त लम्सालको शब्द तथा संगीत रहेको छ । गीतको लिरिकल भर्सनलाई बुढासुब्बा डिजिटलबाट जुन २५, २०२० मा सार्वजनिक गरिएको थियो भने अहिले यसलाई म्युजिक भिडियो सहित एम्स टिभी नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । यस गीतको म्युजिक भिडियोलाई मुनाल शिशिर कोईरालाले निर्देशन गरेका छन् । म्युजिक भिडियोमा मुनाल शिशिर कोईराला र बरुणजंग लिम्बुले अभिनय गरेका छन् । टिभी जर्नालिष्ट र क्यामेरामेनको कथालाई म्युजिक भिडियोमा देखाइएको छ । दिपक गिरीले छायाँकन गरेको यस म्युजिक भिडियोलाई अर्जुन पोख्रेलले सम्पादन गरेका छन् । कलाकारहरुलाई बिनिता पुरीले सिंगारेकी छिन् ।
यसैबिच गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गर्दै गायक प्रविण बेड्वालले ‘मानिसमा मानवता नभए के मानिस ?’ भन्दै मानवता देखाउन सबैसँग आग्रह गरेका छन् । म्युजिक भिडियो साझा गर्दै उनले लेखेका छन्–‘सम्पूर्णमा हार्दिक नमन, मानिसमा मानवता नभए के मानिस ? हो हामी नेपालीहरुमा मानवता छ र त एउटालाई दुःख पर्दा अर्कोले सहयोग गर्छौँ । तर अहिले अवस्था फरक छ । कोभिड १९ को महामारीले मनमा भएको मानवता पनि देखाउन नसक्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ । कोरोना भाइरसले निम्त्याएको अवस्थालाई यो गीतमा प्रस्तुत गरेका छौँ । जिउँदाको जन्ति अनि मर्दाको मलामी समेत हुन नपाउने अवस्थालाई शब्द, स्वर, संगित, दृश्य अनि भावनामा समेटिएको कोसेली ‘यसलाई पर्दा’ हेरेर प्रतिक्रिया व्यक्त गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।
आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईलाई प्रविणको यो गीत कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । गीतको लिंक यस भिडियोको डिस्क्रीपसनमा पनि राखिएको छ । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।